Budata Microsoft Office 2019 maka Windows
Budata Microsoft Office 2019,
Microsoft Office 2019 bụ mmemme ụlọ ọrụ nke na-abịa site na nkwado asụsụ English ma enwere ike ibudata ma jiri ndị ọrụ ụlọ na azụmaahịa jiri ya. Officelọ ọrụ zuru oke nke gụnyere Microsoft Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019, Project, Visio, Access and Publisher.
Microsoft Office, naanị mmemme kachasị mma nke ụlọ, ọrụ na ụmụ akwụkwọ ji eme ihe, na-emelite mgbe niile ma nweta atụmatụ ọhụrụ. Thedị Microsoft Office kachasị ọhụrụ, 2019, nke na-enye atụmatụ ọhụụ kwa afọ nke na-abawanye nrụpụta ọkachasị maka ndị ọrụ, na-arịọ ndị ọrụ na-abụghị ndị na-edebanye aha ha na Office 365 na ndị na-enweghị mmasị igwe ojii.
Office 2019 gụnyere Okwu, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, yana ụdị 2019 nke Visio, Project, Publisher. Ihe ohuru na mmelite maka ndi okacha amara IT na ndi oru diri ya na Office 2019. Anyị na-ekwu maka atụmatụ ndị na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ọdịnaya ka mma noge pere mpe. Na-akwadebe ihe ngosi cinematic na PowerPoint 2019; Enwere ike ịmepụta akwụkwọ sitere nokike maka atụmatụ inking dị elu netiti ngwa na Windows dịka ikpe pensụl mkpanaka, nrụgide nrụgide na mmetụta tilt. PowerPivot na-agbakwunye atụmatụ nyocha data ọhụrụ siri ike na Excel 2019, gụnyere usoro ọhụrụ na eserese. Okwu 2019 na Outlook 2019 na-eweta atụmatụ ọhụrụ iji nyere gị aka ilekwasị anya nihe kacha mkpa (Ngwaọrụ likemụ ihe dịka ịgụpụta ihe na ederede,Kpụrụ Mgbado Anya, nke na-eme ka ọdịnaya gị pụta ìhè site na iwepu ihe ndọpụ uche, na Igbe elebara anya, nke na-ekewa ozi ịntanetị na-adịchaghị mkpa. Ọfịs ọhụrụ ahụ na-enyekwa nchekwa elebara anya na njikwa dị mfe maka ndị ọkachamara IT.
Microsoft Office 2019 Atụmatụ:
Okwu 2019: Mee oru gi ka odi nfe. (Black isiokwu, toolsmụta ngwaọrụ, Okwu mma, Emeziwo ink arụmọrụ, Accessibility ndozi
Excel 2019: Mee nyocha data ka mma. (Ihe osise Funnel - map 2D - usoro iheomume, Ọrụ Excel ọhụrụ, Ikike ibipụta Excel na PowerBI, mmelite PowerPivot, mmelite PowerQuery)
PowerPoint 2019: Mepụta ọdịnaya ndị ọzọ nwere mmetụta. (Bugharịa ikike maka ịhazi ihe ngosi slide na ngosi, Ihe ntụgharị, Ike ịgbakwunye ma jikwaa Oyiyi - SVG na 3D ụdị, Mma pensụl njem)
Outlook 2019: Jikwaa email nke ọma. (Kaadị kọntaktị emelitere, Office 365 Groups1, @mentions, Igbe mbata elebara anya, Kaadị nchịkọta na nnyefe nnyefe)
Homelọ Office & Business 2019 ga-adị maka nbudata maka onye ọ bụla na izu ndị na-abịanụ.
Office 2019 bụ naanị ụdị ma ọ gaghị enweta mmelite nọdịnihu. Ihe ngosi ohuru, ọgụgụ isi, nchekwa na ndị ọzọ dị na ndenye aha kwa ọnwa na Office 365 ProPlus.
Microsoft Office 2019 Ụdịdị